Newcastle United oo tixgelinaysa in Antonio Conte, iyo Frank Lampard qabtaan Shaqada Kooxda kadib markii lala wareegay | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Newcastle United oo tixgelinaysa in Antonio Conte, iyo Frank Lampard qabtaan Shaqada...
Newcastle United oo tixgelinaysa in Antonio Conte, iyo Frank Lampard qabtaan Shaqada Kooxda kadib markii lala wareegay
Newcastle United ayaa lagu soo waramayaa inay bartilmaameedsaneyso tababarayaashii hore ee Chelsea Frank Lampard iyo Antonio Conte si ay u noqdaan bedelka macallinka hadda ee Steve Bruce , haddii ay la wareegaan shaqadooda dhow.
Iyada oo la sheegay in isbahaysiga Sucuudigu uu maalmo gudahood ku dhammaystiri doono heshiiska si uu kooxda ula wareego, wararka xanta ah ayaa sheegaya inay qeyb ka noqdaan isbeddellada ka dhici doona St. James ‘Park, iyadoo la filayo in maamule cusub uu ka mid noqdo ahmiyadaha ugu sarreeya ee milkiilayaasha cusub.
Sida laga soo xigtay football.london , Magpies-ka ayaa bartilmaameed u noqday Frank Lampard iyo Antonio Conte si ay u noqdaan bedelka macallinka 60-jirka ah, kaasoo xilka qabtay bilowgii xilli ciyaareedka 2019-20.
Ka dib laba olole oo lagu xoojinayo darajadooda Premier League ee uu maamulayay Bruce, kooxda ka dhisan St. James ‘Park ayaan weli badin mid kasta oo ka mid ah toddobadii kulan ee ugu horreysay xilli -ciyaareedka cusub, waxayna fadhisaa kaalinta 19 -aad iyadoo leh saddex dhibcood oo kaliya.
Bilowga noocan oo kale ah ayaa horseeday warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in madaxda cusubi ay u muuqdaan inay beddeli doonaan macallinka hadda, iyadoo laba hoggaamiye oo hore oo Chelsea ah ay hadda hormuud u yihiin qabashada Waqooyi Bari.
Lampard ayaa shaqo la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tagay Blues bishii Janaayo, halka tababaraha Talyaaniga uu Premier League ku qaaday Stamford Bridge xilli ciyaareedkii 2016-17, waxaana uu sii raaciyay Inter Milan horyaalka Serie A xilli ciyaareedkii hore.
Previous articleArgentina oo diiday dalabka Tottenham Hotspur ee ah inay ciyaartoydeeda hore fasaxdo
Next articleChelsea oo si xor ah ku doonaysa xiddiga Bayern Munich Niklas Sule
Paul Pogba Juventus ayaa rajeyneysa inay Paul Pogba ku soo celiso Turin iyagoo heshiis 10 milyan oo ginni ah sanadkii kaga soo qaadaneysa...